Mampiaraka An-Tserasera Shinoa
Volana vitsivitsy taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hihaona any Kanada. Rehefa afaka kelikely ny fivoriana matetika nitombo sy naka toerana rehetra manerana izao tontolo izao. Farany, ny volana taty aoriana dia nanapa-kevitra ny handroso sy hanambady. Ankehitriny isika hihevitra ny tenantsika ho toy ny mahafinaritra indrindra mpivady ny fantatra. Misaotra anao Mampiaraka an-Tserasera Shinoa noho ny fanaovana ahy ny luckiest vehivavy eto amin’izao tontolo izao. Aho eto mitadiava olona hiresaka ny mianatra momba ny kolontsaina samy hafa, fa ny zavatra tsara tonga rehefa manantena kely indrindra izany. Dia raiki-pitia amin’ny tsirairay rehefa avy niresaka nandritra ny fotoana kelikely.
Misy foana ny lehibe simia eo amintsika ary isika no tena nanintona ny tsirairay. Nandany ny Shinoa Taom-Baovao fialan-Tsasatra any ANGLETERA ary izahay efa tsara fotoana miaraka. Amin’izao fotoana izao izahay dia miara-miasa amin’ny ny visa sy ny drafitra ho an’ny fanambadiana ankehitriny. Misaotra noho ny zava-drehetra, Fiarahana an-Tserasera Shinoa aho no nanatevin-daharana ny Fiarahana amin’ny Sinoa amin’ny Aterineto manodidina ny taona lasa izay, amin’ny manjavozavo hevitra aho mba hahita ny tonga lafatra mpiara-miasa. Rehefa vitsy diso manomboka aho, dia nahita ahy niady hevitra ny amin’ny maha-te ho tia tanora vehivavy avy Hangzhou. Taorian’ny volana ny e-mail sy miverina, isika no nihaona farany, ary tamin’ny volana janoary, dia nanambady azy aho ankehitriny, raraka ny fotoana eo amin’i Shina sy ETAZONIA izy raha mianatra ampy ny malagasy mba mahazo»visa»ho avy ny fiainantsika miaraka amiko mandrakizay. Izaho ve niezaka vitsivitsy iraisam-pirenena mampiaraka toerana ao amin’ny fotoana sy ny Fiarahana an-Tserasera Shinoa dia ny tena manao ny marina sy mahitsy aho toerana hita. Mazava ho azy, aho, dia nahazo tsara vintana sy ara-potoana ny zava-drehetra tsara fotsiny, fa azoko t ho sambatra kokoa.
Toy ny iray amin’ireo mpitarika an-tserasera mampiaraka toerana hatramin’izao, miaraka amin’ny tsara tarehy ny vehivavy Shinoa, efa mifandray an’arivony Shinoa tokan-tena amin’ny ny mifanaraka avy manerana izao tontolo izao. Raha mitady lehibe Shinoa mampiaraka sy ny fifandraisana, dia afaka hahita azy eo Mampiaraka Shinoa an-Tserasera, izay miara-mitondra an’arivony tokan-tena ny lehilahy sy ny vehivavy Shinoa iraisam-pirenena
Tsara indrindra ny Tanàna any Shina mandritra ny Fivoriana ny Vehivavy Tokan-tena →